Gudiga amaanka oo kulan ku yeeshay Muqdisho | Radio Muqdisho
Gudiga amaanka oo kulan ku yeeshay Muqdisho
Published on December 5, 2012 by admin · 4 Comments · 1,459 views
Gudiga amaanka dowladda Soomaaliya oo maanta kulan ay ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay dhacadii xalay ka dhacay qeyb ka mid ah caasimada dalka.
Kulanka oo ahaa mid ay saxaafadda dibad joog ka ahaayeen ayaa waxaa goob joog ka ahaan ku simaha Madaxweynaha ahna afhayeenka Baarlamanka Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, R/wasaaraha iyo dhamaan hay’adaha amaanka.
Markii uu soo gaba gaboobay kulanka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay ku simaha Madaxweynaha waxa uuna sheegay in kulankooda looga hadlay dhacadiid xalay ka dhacay qeybo ka mid ah Muqdisho taas oo ay saameysay dad shacabka ah.
Afhayeenka baarlamanka ayaa intaasi ku daray in kooxda shabaab ayna dagaal kula jirin dowladda Soomaaliya balse waxa ay dagaalka kula jiraan ay tahay Ummadda Soomaaliyeed ayna dowladda ka hortageyso wax waliba oo lidi ku ah amaanka.
Ku simaha Madaxweynaha ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeyaan hay’addaha amaanka si uu shacabka ay ugu soo dhaxdhuuman kooxaha dhibaatada ku hayo dadka Soomaaliyeed ee caadeystan dhibaateynta dadka rayidka ah.
Sidoo kale R/wasaaraha Soomaaliya oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya ay u dul qaadan doonin dhibaato loo geysto dadka shacabka ayna dowladda ka hortageyso cadii shacabka waxyeelo u geysato.
Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa intaasi ku daray in uu socdo baaritaanno ku aadan cidii ka dambeysay weerarkii madaafiicda ahaa ee xalay lagu weeraray qeybo ka mid ah dagmooyinka gobolka Banaadir.
Mohamed Abdulle says:	December 5, 2012 at 4:50 pm	waxaa ahay nin NSS u shaqayan jiray markaan ardayga ah
1-tanka lagu dhamaykaro shabab waa in la qoraa shabaa kale oo laga dhigo CID ayagaa is yaqaan sidaa darteed
sidoo kale ciidama dharcadka ah waa in logu badiyaa magaalada oo xaafad walaba lageeyo ilaa 200 oo dharcad ah
2- magaalada ha laga saaro milatriga oo ha la dejiyo mcontroolada la ga soo galo magaalada.
3-waa in lasameeyaa socoto duurka gasha oo raadisa meelaha magaaladibadeed ah oo ay ku dhuuntaa.maalinkii oo dhan geed hoostiis ayaa jiifaan habeen kii ayay magaalada soo galaan oo ay qalaasaha sameeyaan.
4-qof kasta oo dowlada u shaqeeya ha la siiyo tababar milateri oo u is ku difaaco iyo tabar dhanka muqaabaarda ah.
5-magaalada bandowdow ha lagu soo rogo wixii ka danbeeya 10:00 cidii socota ha xiro ilaa waagu ka baryo hana la baaro.
intaas hadii la sameeyo mudo lix billod ah isbedel nabadeed ayaa la dareemi doonaa.
haddi qof walba is xilsaaro waa nu ka gudbi caqabada shabaab shaydaan.
Reply »	Kulmiye says:	December 5, 2012 at 8:32 pm	Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan umada soomaaiyeed waxaan kaloo salaan qaas ah udirayaa madaxdeena qaranka salaan kadib waxaan waxaan talo usoo jeedinaya dhaman madaxda qaranka iyo shacabkaba hadii an ku hormaro tan shacabka waxaan leeyahay shacabka waa iidinka waxa dhaawacmaya iyo waxa dhimanaya ee hal meel uga soo jeesta oo yeesan dhicin in laga soo tuuro hubka dhibatada geeyta tusaale ama maah maahyo ayaa oraneysa ushii walaalkaa kudhacday salkeeda aduu kusugayaa oo macnaheeda yahay walalkaa caawi oo dhibka ka ilaali waxaad uga ilaalin kartaa in aan laga soo tuurin xaafada aad dagan tahay hub xitaa soo sheeg waad caawisay walaalkaa hadaad sheegto qaswda yaasha. anaga waxaan anahay soomaliya waxaana nahay dad isla dhashay mana aha in aan isku fiirsano ama aan ka niyad jabno in aan qaadan karno nabada nabada anag ayaa ubaahan ee ayda noo mabaahno? Talada madax deena qaranka aan usoo jeedinaayo ayaa ah
waxaad tihiin udub dhexaadkii wadanka uu ku tiirsanaa isku daya in aad kalsoni galisaan shacabka si ay u jeclaadaan dowlad nimada isku daya cadaalada si shacabka uu ugarto in uu xun yahay xad gudubka isku daya in aad dareen siisaan shaqsi kasto oo soomaali ah in uu qiima leeyahay qaalina uu yahay waxa uu qiimaha kuyeeshayna eeytahay in uu wadanaka udhashay xaqna uu u leeyahay in uu helo cadaalad iyo ixtaraam nafsiyadeed
Reply »	somaliya ha noolaato says:	December 5, 2012 at 8:47 pm	waa wax laga xumaado wixii dhacay. Weerarka dhacay waxaa dhici kartaa inay ka dambeeyeen dadkii cafiska la siiyey ee shabaabka ahaa. Dowlada waa inay dhistaa cabsi weyn oo adag oo lagu xiro qofkii shabaab ah. Dowalada waaa inay xeerka ciqaabta argagaxiisada adkeysaa si shabaabka ay u cabsadaan. Jilicsanaanta dowlada ayaa sabab u ah wixii dhacay. Waa in isbedel lagu sameeyaa dhammaan madaxda amniga iyo sir doonka dowalada oo gudan waayey hawshii loo dhiibay. Somaliya ha noolaato
Reply »	khaliif cabdirashiid says:	December 6, 2012 at 12:02 pm	dilal yaryar oo mujrimiintu u geysanayaan dadka rayidka ah waxba kama bedili doonto hormarka ay sameyneyso dawlada soomaaliya tani waxay noo muujineysaa in ay jabeen kooxihii bucada ahaa ee ummada soomaaliya soo gumaadi jirey waxaana ilaahay ka baryeynaa in ta hadheyna in gacanta lagu soodhigo in shaa allaah